Vidio - Okwu Foundation • Echiche na Akara Aka na HW Percival
The Videos Foundation Videos
Echiche na Mbibi, site Harold W. Percival, ọtụtụ ndị ekwupụtala dị ka akwụkwọ zuru oke nke e detụrụla gbasara Mmadụ na Eluigwe na Ala. N'ịbụ nke e bipụtaworo kemgbe ihe karịrị afọ 70, ọ na-amụnye ìhè na-egbuke egbuke n'ajụjụ ndị miri emi nke gbagwojuru mmadụ anya. Ibe vidiyo anyị gụnyere ihe ngosi ọdịyo nke ibe 3 mbụ nke Okwu Mmalite ma hụperetụ, na-eji okwu nke Percival eme ihe, n'ụzọ a na-adịghị ahụkebe Echiche na Mbibi edere ya.
Harold Percival kọwapụtara ike ya, ihe omimi nke ịmara Ọmụma na okwu okwu ya na oke ọrụ ya, Echiche na Mbibi. Vidio a bụ akụkọ sitere na ibe ndị ahụ. Nke a bụ naanị ebe ejiri mee ihe onye mbụ "M". O putaghi ebe ozo Echiche na Mbibi. Percival kwuru na ọ họọrọ ka akwụkwọ ahụ guzosie ike n'onwe ya ma ghara inwe mmetụta site n'àgwà ya.
Vidiyo dị n'okpuru na-agụnye ọdịyo zuru oke Okwu Mmalite—Isi nke mbụ dum—na Echiche na Mbibi nke Harold W. Percival dere. Ọgụgụ a sitere na mbipụta nke iri na otu.
Nwa akwukwo nke Echiche na Mbibi, Joe, kwuru echiche ya banyere akwụkwọ ahụ na otú o si metụta ndụ ya.